लाचार कास्की प्रहरी, कहिले पक्राउ पर्लान् बतास ? – Tandav News
लाचार कास्की प्रहरी, कहिले पक्राउ पर्लान् बतास ?
ताण्डव न्यूज द्वारा	 २०७६ बैशाख १० गते मंगलवार १०:५४ मा प्रकाशित 3,661
ठगीको आरोप लागेका बतास अर्गनाइजेसनका विपेन्द्र (विपिन) बतासलाई कास्की प्रहरीले अझै पक्राउ गर्न सकेको छैन् । बतास विरुद्ध व्यवसायी दालप्रसाद श्रेष्ठ र जनक पहारीले कास्की प्रहरीकहाँ दिएको जाहेरी वैशाख २ गते दर्ता भएको थियो ।
बतासले पहारीको २ करोड २५ लाख रुपैयाँ र श्रेष्ठको १ करोड ९८ लाख रुपैया गरि ४ करोड २३ लाख रुपैया ठगि गरेको आरोप छ । जाहेरी दर्ता भएपछि फरार रहेका बतासलाई एक साता बढि भईसक्दा पनि कास्की प्रहरी पक्राउ गर्न नसक्नु शंकाको विषय बनेको छ ।
कास्की प्रहरी प्रमुख तथा एसपी ओम रानाले बतासलाई पक्राउ गर्नका लागि प्रहरी दिन रात लागि परेको बताए । ‘हामी दिन रात लागेका छौँ,’ उनले भने,‘हामीले केन्द्रसँगको समन्वयमा देशैभर खोजी तिव्र पारेका छौँ । हाम्रो अपराध महाशाखाको टोली र कास्की प्रहरीको टोलीले संयुक्त रुपमा खोजी गरेको छ । कास्की प्रहरीले अवश्य पक्राउ गर्छ ।’
बतासले ठगि गरेको समाचार लेखेकै कारण ताण्डव न्युजका सम्पादक अर्जुन गिरीलाई भने कास्की प्रहरीले वैशाख २ गते नै पक्राउ गरेका थिए ।
४ दिन अघि पक्राउ पुर्जी आएपनि कुनै जानकारी नदिई कास्की प्रहरीले बतासको प्रभावमा परि गिरीलाई पक्राउ गरी केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो काठमाडौँ पठाएको थियो ।
बतासले पैसा र शक्तिकै आडमा सम्पादक गिरी विरुद्ध साइबर अपराधमा मुद्दा दर्ता गरेका हुन् । सम्पादक गिरी बैशाख ४ गते जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट साधारण तारेखमा रिहा भएका थिए ।
अलपत्र महिला बन्दी गृह निमार्ण,निर्मित भित्तासमेत पल्टने अवस्था
क्यान मेला सकियो, टिकट नं. २८९०८१३ लाई ल्यापटप उपहार
समृद्धि र विकास अबको आवश्यकता : प्रधानमन्त्री ओली
उपराष्ट्रपतिमा पुन निर्विरोध निर्वाचित